गृहमन्त्री थापा र नेपालका लागि इराकका राजदूतबीच भेटवार्ता - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) सँग नेपालका लागि इराकका नवनियुक्त गैरआवासिय राजदूत डा. फलाह अब्लुल्हसन अब्दुलसदाले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–इराक द्धिपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
भेटमा गृहमन्त्री थापाले राजदूत डा. अब्दुलसदालाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुुभकामना दिँदै उनको कार्यकालमा दुई देशको सम्बन्ध थप उचाईमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
याे पनि पढ्नुस ओली–बादल भेटः मन्त्री नेम्वाङ र ढकाल पनि थपिए
उनले इराकमा ठुलो संख्यामा रोजगारीका लागि नेपालीहरु पुगेको बताउँदै त्यहाँ रहेको नेपालीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन राजदूत डा. अब्दुलसदासँग आग्रह गरे ।
नेपालले भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन गईरहेको सन्दर्भमा इराकबाट थप पर्यटकहरुको आगमनका लागि वातावरण बनाईदिन राजदुतसँग गृहमन्त्री थापाले आग्रह गरे ।
याे पनि पढ्नुस निर्वाचनका लागि तयारी गर्न गृहमन्त्रीले दिए सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
राजदुत डा. अब्दुलसदाले इराकमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षामा आफुहरु गम्भिर रहेको बताउँदै इराकको विकासमा नेपालीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको चर्चा गरे । उनले आतकंवाद अहिले विश्वको साझा समस्या रहेको भन्दै आतकंवाद विरुद्ध आफुहरुको लडाईमा नेपालको समेत साथ रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
याे पनि पढ्नुस लिदीको बस्ती स्थानान्तरण गर्छौंः गृहमन्त्री थापा
उनले भारतमा वर्षेनी ८० हजार इराकी पर्यटकको रुपमा आउने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालले इराकीलाई प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया खुकुलो बनाए नेपाल भ्रमण वर्षमा ठूलो संख्यामा इराकी नेपालमा भ्रमण गर्ने बताए ।
ट्याग्स: डा. फलाह अब्लुल्हसन अब्दुलसदा, रामबहादुर थापा, शिष्टाचार भेटवार्ता